Apple inoburitsa iOS 11.2.2 ye iPhone ne iPad kugadzirisa bugs | IPhone nhau
Appel achangobva kuburitsa nyowani iOS yekuvandudza ye iPhone, iPad uye iPod Touch. Iyo nyowani vhezheni, iOS 11.2.2, yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kumagadzirirwo efoni yako kuiisa kuburikidza neOTA, pasina kukosha kwekubatanidza chishandiso chako kune komputa.
Iyi vhezheni itsva inounza mhinduro kuzvikanganiso zvekuchengetedza, kunyanya ku "Meltdown" uye "Specter" kushaya simba Iwo akataurwa pamusoro pazvo zvakanyanya svondo rapfuura uye ayo Apple akati akange agadzirisa zvishoma asi aigona kuvhara zvachose kuburikidza nekuvandudzwa.
Parizvino hatizive dzimwe nhau dzakabatanidzwa mune idzi shanduro nyowani, asi isu tichazotaurirana kwauri pano pano kana paine chimwe chinhu chakakodzera kutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inoburitsa iOS 11.2.2 ye iPhone ne iPad kugadzirisa bugs
Zvakanaka ipapo isu tichafanirwa kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona.
Chavaigona kugadzirisa kudzikira kwavakakonzera mumaPhones ekare
Ndine urombo kukuudza kuti handifunge kuti vachazvigadzirisa sezvo vasingazvione sekutadza, vanga vachida kuti zvive saizvozvo. Pamwe vanoguma vopa sarudzo kwete yekudzora pasi nemutengo wehupenyu hupfupi hwebhatiri, asi izvo, pamwe.
Ichokwadi ndechekuti, ini ndichiri kushamisika nekunyanyisa bhatiri kunwa kweIOS 11, ndine SE uye 6S + uye kwete, zvinoita sekunge ndinofanira kuunza nhare mbiri idzi kuitira kuti imwe ipere na14: 00 masikati uye imwe inomhanya kunze kwemaawa mashanu gare gare uye kukwanisa kusvika kumba kwangu. Kana ini ndingadai ndisina kugadzirisa
Susana medina akadaro
Ndiine iOS 11.2 Ndine matambudziko neappapp ini handina ruzha kana preview kana meseji yasvika paWhatsApp ndinofanira kunge ndiine application kuti ndizive kuti chii Chinetso ichi chinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza nekuti iyo sisitimu inoshanda haishande.
Pindura Susana medina
Susana, ndinotya kuti iwe chete ndiwe une dambudziko irori, saka zvinoita sekunge uchafanirwa kurigadzirisa nekudzoreredza WhatsApp nevamwe kupfuura zvimwe
Pindura kuna Osiris
Zvese zvakagadziriswa marara !!!! kugara uchikwenya kumusoro mashandiro uye kurova bhatiri ...
Zvakanaka kana ndichiziva kuti ini handina kugadzirisa kune vhezheni 11.2.2 tsss! Bhatiri ikozvino rinogara zvakanyanya kushoma uye icho chitsva kubva kumwedzi mishoma yapfuura, vakachichinjira kwandiri kubva kuApple nekuti iyo yekutanga mbozhanhare yaive nehurema hwekugadzira .. Ruzha rwemukurukuri rwakaderera zvakanyanya pawakaisa mimhanzi uye usati akanzwa zvinonzwika .. Enfin marara ekuvandudza 11!
Ini ndinofanira kunge ndiri ndega, asi ndinofara neIOS 11. Ini ndinobvuma kuti kusvika kunguva 11.2 uye nekudzosa kwakachena pasina backup handina kugadzirisa matambudziko. Iye zvino ndafara. Kune vese vane matambudziko, ini ndinokurudzira kushanyira technical service izvo ndezvairi.
Matambudziko api awakave nawo? Hupenyu hwebhatiri hwakagadziriswa nekudzoreredzwa kwakachena?
uchiita izvi uye kurodha pasi kubva icloud zvingaite zvakafanana?
Pindura kuna XaviBcn44
Ini handizive kana ichigadzirisa bug asi haichabvumidze ini kuti ndigovane internet nenzira chero ipi, imwe yelimu uye yakati wandei jecha
NeChishanu manheru ndakamira kumutsiridza iyo iOS 11.2.2 uye kubva zvandakamuka Mugovera kubata kwacho hakushandi zvakanaka, kwakanyorwa uye hakuite, iko kuita sekunge handikupi chero odha, uye zviri kubva panguva nenguva.
Izvo zvakaitika kune mumwe munhu here? Ndiri kushamisika kuti inowirirana neyekuvandudza uye ini handina kuirasa kana chero chinhu.
Hazvigone kuishandisa seizvi !!
claudio caceres akadaro
Ini ndakagadzirisa, inomhanya chaizvo, hupenyu hwebhatiri hwakanaka, hwakafanana, hunogara kweawa rimwezve
Pindura claudio caceres
Luis Heras akadaro
Ndine dambudziko rekuti harindipe sarudzo yekubvisa iyo app, rinopinda nepakati asi x hairatidzike bvisa
Pindura kuna Luis Heras
WeMo Bridge, ichiwedzera kuenderana kweAppleKit